ABATHENGI BEAMAZON: NANTSI IBHAYISIKILE EPHAMBILI YEEKLASI EZIJIKELEZAYO ZASEKHAYA - UKUPHILA
Kukho i-Spin Bike kwiAmazon eyi1 / 4 Ixabiso lePeloton
Ukulungiswa: Inguqulelo yangaphambili yale post yathetha ngempazamo ukuba i-Echelon Prime Bike yayiyintsebenziswano ekhethekileyo neAmazon. Nangona kunjalo, kwingxelo kuNyango lweZindlu, isithethi seAmazon sathi, Le bhayisekile ayisiyomveliso yeAmazon okanye inxulumene neAmazon Prime. U-Echelon akanabo ubuhlakani obusemthethweni neAmazon. Sisebenza no-Echelon ukucacisa oku kunxibelelwano lwayo, siyeke ukuthengisa imveliso, kunye nokutshintsha uphawu lwentengiso. Siye sayihlaziya ukuze ichane ngakumbi.
Nokuba uhlala unamava rhoqo kwindawo yakho yokujikeleza istudiyo, okanye ujonge indlela enefuthe elisezantsi lokuhlala ukhuthele ngexesha lokudideka kwezentlalo, ibhayisekile yasekhaya ejikelezayo inokuziva njengesona sisombululo silungileyo ekhayeni lakho kwaye iinjongo zempilo. (Phakamisa isandla sakho ukuba uGoogled Iibhayisikile ezihamba phambili zokujikeleza iiveki zibekelwe bucala. Ewe, nam.) Ngelixa UPlatoon Ibhayisekile ngokuqinisekileyo ivelise isabelo sayo esifanelekileyo se-buzz, ithegi enexabiso elinamanani amane inokuba isincinci kwisipaji sakho okanye kwinqanaba lakho lokuzibophelela. Yintoni ekufuneka ayenze umqhubi webhayisikile?
Ngena (uyiqikelele) iAmazon, apho i-Echelon ngoku ithengisa khona ibhayisekile emileyo exhotyiswe nge-WiFi engesinye kwisine sexabiso leso sikhundla sePeloton, Iingxelo zeshishini leCNN . Ibhayisekile uthengisa i $ 499.99 , kwaye iza novavanyo olunconywayo lweentsuku ezingama-30 kuluhlu lweeklasi luka-Echelon, oluthi iqala kwi- $ 19.99 ngenyanga (ngexesha lokupapasha, i-499 yeedola ibonakale ngathi iyathengiswa, kunye neyona ndlela ibiza ixabiso eliphantsi eya ku- $ 999, ke… qhubeka ujonge, ukuba ngequbuliso unamavili ebhayisikile ajikelezayo emehlweni akho).
Ngelixa isakhelo esimnyama kunye nolwakhiwo olomeleleyo lusenokubonakala lufana nePeloton ene-icon, ngoku kukho umahluko ophambili: Imodeli ye-EX-Prime, eyaziwa ngokuba yi-Prime Bike, ayibonisi isikrini esakhelweyo ukusasaza iiklasi, ke Kuya kufuneka uthabathe ithebhulethi okanye ilaptop ekufuphi ukuba ungathanda amava okusebenza.
Oku kukude kuphela kukhetho lwebhayisikile oya kulifumana kwiAmazon. Iqonga lithengisa yonke into ukusuka zokubhala emileyo elingana naphantsi kwedesika yakho ukuze ukwazi ukwenza izinto ezininzi ngexesha lokufowuna kwakho emsebenzini, ukuya umthambo iibhayisekile kunye nebhayisekile yesikolo esidala-uyazi, uhlobo oluya kukususa ukusuka kwindawo engu-A ukuya kwindawo B-kunye neminqwazi, iiracks zebhayisekile, kunye nezinye izixhobo ukongeza amava akho okuhamba ngebhayisikile. Unako kwakhona ukuseta ngokulula istudiyo sakho se-DIY spin, esinebhayisekile engaxhunyiwe Ukuhamba ngebhayisikile eshushu kwelanga , ukuya Ukunyuka kwethebhulethi , kunye nefowuni okanye ithebhulethi yakho. Nokuba uthe wongeza ikhandlela, njengale dupe ikhuthazayo Iphunga lokutyikitywa kweSoulCycle , uya kuba ngaphantsi kweedola ezingama-500.
Kodwa eyona nto yenza isiqwenga sesixhobo sokuzilolonga kukuba uyisebenzisa rhoqo, kwaye ukuba uyakonwabela ukwenza njalo. Iibhayisikile ezi-Smart zibonelela ngeempawu ezakhelweyo ngaphakathi ezibonakalisiweyo zigcine uzimisele ukusebenza, ukusuka ekuvumela ukuba unxibelelane nabahlobo kwinkonzo ukudala ukhuphiswano olunobuhlobo phakathi kwakho kunye nabanye abathatha iklasi. Usenokungakwazi ukufumana izandla zakho iintsimbi okanye iidumbbells Okwangoku, kodwa iNkulumbuso yeBhayisekile inokuba lukhetho oluqinileyo kwabo bafuna enye indlela ekumgangatho wentlalo eya kuyo nayiphi na iklasi ye-IRL oyiphose kakhulu, ngakumbi xa imozulu iqala ukujika.
Umhleli weNdlela yokuphila
U-Ella Cerón nguMhleli weNdlela yokuPhila kweZonyango, egubungela indlela yokuphila obona bomi bakho ubumnandi kwikhaya olizenzele lona. Uhlala eNew York neekati ezimbini ezimnyama (kwaye hayi, ayisiyonto incinci).
Imibala yepeyinti elishumi kunye nokuLandelwa kweCult
Iingcebiso ezi-7 ezivunyiweyo zeGumbi lokulala eziNokukunceda usuke ku-0 uye kwiZen
Sifumene i-Wicker Sconces ethandekayo engayi kuphula iBhanki
Ithetha ntoni ingelosi engu-911
yintoni intsingiselo yama-222
1234 inombolo yengelosi uthando
athetha ntoni amanani u-444